ရွှေရောင်အမွှေးရှည်လေးတွေ နှင့် ကြင်နာချစ်ခင်တတ်သော Golden Retriever – YANGON STYLE
ရွှေရောင်အမွှေးရှည်လေးတွေ နှင့် ကြင်နာချစ်ခင်တတ်သော Golden Retriever
အိမ်မွေးခွေးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ GR လို့ခေါ်သည့် “ Golden Retriever ” အကြောင်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လူကြိုက်များတဲ့ခွေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ GR ဆိုတာနဲ့ ရွှေရောင်အမွှေးရှည်ကြီးတွေ နဲ့ချစ်စရာခွေးအကြီးကြီးဆိုပြီး သိကြပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် GR လေးတွေရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် စံချိန် စံနှုန်း အချက်အလက်လေးတွေကို မိတ်ဆက်ပါမယ်။
အမည် = Golden Retriever
ဇာတိ = Scotland, United Kingdom
ပေါင်ချိန် = (အထီး) 65–75 lb (29–34 kg) ၊ (အမ) 55–65 lb (25–29 kg)
အမြင့် = (အထီး) 22–24 in (56–61 cm) ၊ (အမ) 20-22 in (51-56 cm)
အမွှေး = အဖြောင့် (သို့မဟုတ်) အနည်းငယ်လှိုင်းဖြစ်ရုံအကောက်
အမွှေးရောင် = ရွှေရောင်အနု၊ ရွှေရောင်အရင့်၊ Cream အရောင် (နို့နှစ်ရောင်)
သက်တမ်း = ၁၀နှစ် – ၁၂နှစ်
အဆင့်၊ စံချိန် စံနှုန်း
FCI = Group 8, Section 1 Retrievers #111
AKC = Sporting
ANKC = Group3(Gun dogs)
CKC = Group 1 – Sporting dogs
KC (UK) = Sporting dog
UKC = Sporting and fishing
အခုဖော်ပြသွားတာတွေကိုဖတ်ပြီး GRလေးတွေရဲ့ အပေါ်ယံအသွင်အပြင်ကို သိရပြီဆိုတော့ သူတို့လေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို ဆက်လက်ပြီး ပြောပြပေးသွားမယ်။
GR လေး တွေကို ကလေးထိန်းလို့ခေါ်ရလောက်အောင်အထိ ချစ်ခင်တတ်ကြပါတယ်။ ကလေးအသံလေးတွေ ကြားရင်ကိုမနေနိုင်မထိုင်ဖြစ်ပြီး ဆော့ချင်၊ ချစ်ချင်စိတ်လေးတွေနဲ့ အပြေးရောက်လာတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးပဲချစ်သလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ GR လေးတွေက သေးသေးလေးတွေဆို အရမ်းကြင်နာတတ်ပါတယ်။ ခွေးအချင်းချင်း၊ ကြောင်လေးတွေနှင့်တခြားတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုပါချစ်တတ်ပါတယ်။
GR လေးတွေကလည်း အမဲလိုက်ခွေးအမျိုးအစားထဲမှာပါတော့ စူးစမ်းစိတ်ကတော့ အရမ်းကိုကြီးပါတယ်။ စူးစမ်းစိတ်နှင့်အတူ မြင်မြင်ရာပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်း ကိုက်ပါတယ်။ ပျင်းလည်းကိုက်၊ ပျော်လည်းကိုက်တဲ့ GR လေးတွေရှိနေရင် ဖိနပ်တွေနဲ့တခြားတန်ဖိုးကြီး၊ အရေးကြီးတာလေးတွေ သေချာဂရုစိုက်သိမ်းထားဖို့ လိုပါမယ်။
၃. ဉာဏ်ရည် နှင့် သင်ယူမှု
ဉာဏ်ရည် နှင့် သင်ယူမှုစွမ်းရည်လည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အမိန့်နာခံနိုင်စွမ်းလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အမဲလိုက်သူများက သူတို့ရဲ့နူးညံ့တဲ့ပါးစပ်ကြောင့် သားကောင်များကိုက်ချီလာလျှင် ပုံမပျက်သည့်အတွက် အမဲလိုက်သည့်နေရာတွင် အသုံးချလို့အကောင်းဆုံးခွေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ သူတို့က ကုန်းပေါ်အမဲလိုက်ခြင်းထက် ရေထဲအမဲလိုက်ခြင်း ပိုမိုကျွမ်းကျင်လှပါတယ်။ သခင်ရဲ့အသက်ကိုလည်း ကယ်နိုင်သည့်အလွန်သစ္စာရှိသော ခွေးအမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်စောင့်ထားခဲ့လျှင်တော့ ငါးပါးမှောက်ရုံမက ဆယ်ပါးပါမှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ လူကိုမကိုက်တတ်တဲ့အပြင် ချစ်ခင်တတ်တော့ ဧည့်သည်လာလျှင် စိတ်လှုပ်ရှားပျော်မြူးပြီး လိုက်ကပ်နေတတ်ပါတယ်။ သခင်ကိုရန်မူလာလျှင်တော့ အသက်စွန့်ပြီး ကယ်တတ်ပါတယ်။ GR တွေက အကောင်ကြီးမျိုးဆိုတော့ အဟန့်ကတော့ကောင်းပါတယ်။
၅. ကျန်းမာရေး နှင့် သန့်ရှင်းမှု
ကျန်းမာရေးကတော့ အကြမ်းခံတဲ့အထဲပါပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဓာတ်မတည့်မှုတွေလည်း မရှိပါဘူး။ အပူဒဏ်တော့မခံနိုင်ကြပါဘူး။ ရေခဏခဏချိုးပေးရပါမယ်။ အမွှေးညှပ်ပေးရပါမယ်။ အမွှေးကျွတ်တတ်တော့ နေတိုင်းသေချာဖြီးပေးရပါမယ်။ အပြင်လွတ်ပေးလိုက်လျှင်ကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးညစ်ပတ်ပြီး ပြန်လာပါမယ်။ သဘာဝတရားလေးတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ ပျော်မြူးပြီး ခုန်ပေါက်ဆော့ကစားမယ်။ ရေထဲလူးလိမ့်ဆော့ကစားခြင်း၊ မြေကြီးများလူးခြင်းတို့ကို စိတ်ကြိုက်ဆော့ကစားပြီးမှ ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
GR လေးတွေရဲ့ ကြင်နာတတ်မှု၊ အလုပ်ကိုအားထုတ်လုပ်ကိုင်မှုတို့ကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့၊ ဆေးတပ်ရင်းအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ မိုင်းရှာအဖွဲ့၊ physiotherapy (ရူပကုထုံး) အလုပ်တွေကိုတောင် လူတွေနဲ့တွဲလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတွင် Dentistry မှာတောင် Pain Comforter အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပါပြီ။ အများဆုံးကတော့ ကလေးလူနာများအတွက် ဆေးခန်းကိုကြောက်စိတ်၊ ဆရာဝန်ကိုကြောက်စိတ်တွေကို လျော့ကျပြီးကုသမှုကို ကောင်းစွာခံယူကောင်းတွေ့ရှိလာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လေးတွေ က အားငယ်တတ်သူတွေကိုအားပေးတတ်တဲ့ အပြင် လူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို အခြားခွေးတွေထက် ပိုပြီး နားလည်ပေးတတ်တာကြောင့် Therapy dog အနေနဲ့ အသုံးများဆုံးခွေးဖြစ်လာပါတယ်။ ဉာဏ်ရည်ချို့ယွင်းတဲ့ကလေးလေးတွေ အခြားလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါ အဆင်ပြေရန်၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ အမြင်အာရုံချို့ ယွင်းသူများအတွင် လမ်းပြရုံသာမက ATM တွင် ငွေထုတ်နိုင်ခြင်းစသည့် လူတစ်ယောက်နီးနီးအဖော်ပြုလုပ်ဆောင်နိုင်သော GRလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
GR လေးတွေရဲ့ သိတတ်ချစ်ခင်မှုများကြောင့် ခွေးလိမ္မာရုပ်ရှင်များတွင် သူတို့လေးတွေကိုအသုံးများကြပါတယ်။ အထက်ပါအချက်များကြောင့်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် မွေးမြူခံရမှုမှာ နံပါတ်(၄)အဆင့်ရှိနေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ GR လေးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလည်း တော်တော်များများသိကြပြီး လူကြိုက်များတဲ့အကောင်ကြီးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Grade နှိမ့်ရင်တော့ ၂သိန်း၊ ၃သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။ ခြေလက်တွေတုတ်ပြီး အမွှေးပိုလှရင်တော့ ၄သိန်း၊၅သိန်း ဝန်းကျင်လောက် ဈေးကွက်ရှိပါတယ်။ Thai Import တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ သားဖောက်ရောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Thai ကနေ Grade A အမြင့်ဆုံးမှာလျှင်တော့ ၁၀သိန်း၊ သိန်း၂၀ ဝန်းကျင်အထိ ဈေးပေါက်ပါတယ်။
ခြံကျယ်ကျယ်မှာ မွေးတာကတော့ သူတို့လေးတွေအတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။ တိုက်ခန်းဆိုလျှင် တော့အဆင်မပြေကြပါဘူး။ တိုက်ခန်းနှင့်မွေးမည်ဆိုလျှင်တော့ အကောင်သေးအမျိုးအစားကို မွေးမြူရန်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုလျှင်တော့ GR လေးတွေအကြာင်းကို သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ မွေးမြူတဲ့အခါမှာ ကိုယ်သုံးနိုင်တဲ့ငွေကြေး၊ အကျယ်အဝန်း၊ သူတို့လေးတွေထားရန် သင့်တော်သည့်နေရာ၊ ရာသီဥတု၊ ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွေက အများကြီးအရေးပါလှပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးဝယ်လိုက်ခြင်းဖြင့် သူတို့လေးတွေကို ဒုက္ခခေါ်ပေးသလိုဖြစ်နေပါမယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ မချစ်တတ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး ဆိုလျှင်အစကတည်းက မွေးရန်စိတ်မကူးပါနဲ့လို့ အထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။